अल्ट्रासोनिक तारा, पाइप र प्रोफाइल (UAD) को रेखाचित्र सहयोग - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स एक अल्ट्रासोनिक थ्रिलिंग वायर मरल्डर को निर्माण गर्दछ जो मानक तार संग काम गर्दछ 42mm बाहरी व्यास को। अल्ट्रासोनिक आविष्कारमा व्यास कमीको लागि आवश्यक रेखा तनाव आवश्यक छ। यो रेखा गति बढाउन वा प्रति रेखा आकारको आकार घटाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो प्रविधिको साथ, तांबे, स्टील वा एल्युमिनियम जस्ता थुप्रै सामग्री तेलको सट्टा वा साबुन साटो शुद्ध पानीको साथ लिन सकिन्छ।
अल्ट्रासोनिक्स किन तार ड्राइंगको साथ मिलाउनुहुन्छ?
तार रडहरूको रेखाचित्रलाई घर्षण र सामग्री पुन: हटाउनको लागि शक्ति चाहिन्छ। एक परम्परागत रेखा रेखामा, यो शक्ति घूर्णन क्यापिस्तानबाट मात्र हुन्छ। तारमा टाँसेली बलले छिटो रेखा गति, तार व्यास र व्यास कमजोरी अनुपातको साथ उठाउँछ। तनसिल शक्ति र उपज शक्तिले साना तारहरूको रेखाचित्रको लागि महत्वपूर्ण कारकहरू छन्, किनभने सानो-तार डाइमिटरको लागि क्रस-सेक्शनमा परिधिको अनुपात उच्च हुन्छ। यसले रेखाचित्र रेखा गति र व्यास घटाउने प्रति रेखा चरणमा सीमित गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक रूपले सहयोग पुर्याउन तारहरू, पाइपहरू र प्रोफाईलले तलको सुरक्षा बल र यसैले भंगको जोखिम कम गर्छ।
अल्ट्रासोनिकले कसरी तार ड्राइंग कार्य गर्दछ?
अल्ट्रासोनिक रूपमा चित्रण गर्दा तार मर्नको लागि उच्च आवृत्ति लम्बकीय कंपन प्रसारण गर्दछ। सामान्य कम्पन आवृत्ति 20 कि.जी.एचज हुन्छ, तार मरे विस्थापन अप 100 माइक्रोन हुन सक्छ (pk-pk)। उपकरणको कम्पनिकी वेग र तार रड गतिको बीच उच्च अनुपात, कम तार तार लाइनमा तनसिल शक्ति हुन सक्छ। यसैले अल्ट्रासोनिक संचालित ड्राइंगले कुनै पनि तनमन तनाव सीमाको लागि एक ड्राइंग चरणमा छिटो रेखाचित्र रेखा गति वा ठूलो आकारको कमीलाई अनुमति दिन्छ। टensile बल मा कमी अल्ट्रासोनिक संचालित सानो सामाग्री डायमीटर को लागि र पाइप जस्तै खोखले को तार को लागि सबै भन्दा अनुकूल छ।
तारको दीर्घवृत्त भाइब्रेसन
के म अल्ट्रासोनिक तार रेखाचित्र प्रयोग गर्न सक्छु?
तारों को अल्ट्रासोनिक रूप से सहायता वाला रेखाचित्र 300 मिनेट / मिनेट (900ft / मिनेट) सम्म को गति को लागि कार्य गर्दछ। मानक अल्ट्रासोनिक मरनेवालाले तारको साथ 25mm र 42 मिमी बाह्य व्यासको साथ काम गर्दछ। अन्य आयामहरूको लागि अल्ट्रासोनिक मर धारकहरू अनुरोधमा विकास र उपलब्ध छन्।
साधारण तारमा आन्तरिक व्यास मरिसकेको छ, 0.01mm देखि 8mm (AWG # 40 सम्म AWG # 0)।
अल्ट्रासोनिक रूपमा एसिस्ट रेखाचित्रका लागि के चाहिन्छ?
UAD ले तपाइँको मानक तार मर्न प्रयोग गर्दछ। एक अल्ट्रासोनिक गुंजाइश – पनि सोनोट्रोड भनिन्छ – पारंपरिक मृत धारक को प्रतिस्थापन गर्दछ। यो सोनोट्रोड हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्स को एक विशेष नवाचार हो। यसले तारमा मर्नुमा कुशलतापूर्वक अल्ट्रासोनिक लम्बाइब्रेसन कम्पनलाई पठाउँछ। स्थापना स्पेस सुरक्षित गर्न अल्ट्रासोनिक चालक – ट्राडड्युडरर पनि भनिन्छ – सोनोट्रोड माथि शीर्षबाट आउँछ। एउटा सामान्य UAD सेटअपलाई 250mm भन्दा कम खाली ठाउँ चाहिन्छ।
अल्ट्रासोनिक कम्पनहरू हाम्रो मानक अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूद्वारा उत्पन्न हुन्छन्, जस्तै: UIP1000hdT (1.0kW), UIP1500hdT (1.5kW), UIP2000hdT (2.0kW) वा UIP4000 (4.0kW)। यी एकाइहरूले संसारभरको 24 घण्टा /7डी अपरेसनमा विभिन्न प्रक्रियाहरू चलाउँछन्। आवश्यक पर्दछ लाइनको गति, सामग्री र आयामहरूमा निर्भर गर्दछ। अल्ट्रासोनिक एकाइ इन्टरभेसिबल हुन्छ, लाइन गतिमा घटनाहरू बढी शक्ति आवश्यक पर्दछ।
तपाईं कुनै पनि अवस्थित रेखाचित्र रेखा सजिलै संग अल्ट्रासोनिक प्रणालीको साथ पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै तार लाइन निर्माताहरू अधिष्ठापन वा हाम्रो अल्ट्रासोनिक प्रणालीको पुनःप्राप्तसँग राम्रा परिचित छन्। केहि नयाँ मिसिनहरु को अल्ट्रासोनिक सिस्टम रिट्रोफिट को लागि आवंटित स्थान छ, पहिले देखि नै।
कृपया हामीलाई तपाईंको रेखाचित्र आवश्यकताहरूको बारेमा बताउनुहोस्। हामी तपाईंको प्रक्रिया र मेशिनमा अल्ट्रासोनिक्स लाई एकीकृत गर्न को लागी काम गर्न खुशी हुनेछौं। कृपया सामग्री निर्दिष्ट गर्नुहोस्, लाइन गति, तनाव, तनाव सीमा र डाईमिटर। तपाईको प्रक्रियाको उद्देश्य के हो? हामी तपाईंको सामग्रीसँग एकल चरण ड्रा-चरण प्रणालीमा तार ड्राइंग परीक्षण चलाउन सक्छौं।